Wasiiro laga helay Cudurka Coronavirus - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Wasiiro laga helay Cudurka Coronavirus
Wasiiro laga helay Cudurka Coronavirus
Wasiirka warfaafinta Michael Makuei wuxuu BBC u sheegay in dhammaan xubnihii ka tirsanaa guddiga la dagaalanka cudurka Covid-19 laga xaqiijiyay in laga helay cudurka marka laga reebo wasiirka caafimaadka.
Wuxuu wasiirka beeniyay wararka sheegayo in madaxweyne Salva Kiir uu ku dhacay feyraska oo isagu ka tirsanaa guddiga ka hortagga cudurka ee haatan badankooda uu ku dhacay.
Waxay arrintani imaaneysaa xilli dhawaan cudurka la xaqiijiyay in laga helay madaxweyne ku-xigeenka South Sudan Riek Machar iyo xaaskiisa iyo wasiirka gaashaandhigga ee dalkaas kaddib markii ay la kulmeen xubnihii ka tirsanaa guddiga la dagaalanka Covid-19.
Waxaa sidoo kale cudurka laga helay tiro kamid saraakiisha ilaalisa xubnaha laga helay cudurka, waana la karantiilay dhammaantood.
South Sudan waxaa sare u kacay kiisaska la xiriira feyraska Korona, wuxuu dalka xaqiijiyay 481 kiis halka dhimashadu ay gaartay 6.
Previous articleDHAGEYSO: Warka Duhur ee Radio Risaala 22-05-2020
Next articleSAWIRO:-Koonfur Galbeed oo soo bandhigtay hub ay howlgal ku qabteen